This entry was posted on Tuesday, May 27, 2008 and is filed under ဟိုရေးဒီရေး . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
မြစ်ကြီးနားကို ကျောင်းတက်ဖို့ ရထားနဲ့ပြန်တော့
သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့ပိုဆို ခုံမရလို့ ဒီတိုင်းလိုက်စီးတဲ့သူတွေကို တွဲထည်းမှာအပြည့်
ကိုယ်က နောက်ဆုံးမှာထိုင်လည်း အိမ်သာကိုရောက်အောင်မနည်းသွားရတယ်
အိမ်သာထဲရောက်တော့ ပြသနက မပြီသေးဘူးအထဲကနေ
ဂျက်ချလို့ရဘူး လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ထားရတယ်
ရထားယိမ်းတာနဲ့ တံခါက ဟသွားလို့ အပြင်ကလူတွေမမြင်ရအောင် လက်က တံခါးဂျက်ကိုလွတ်ရဲဘူး
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားရထားတွေ ရေမရတော့ တော်တော်ဆိုးတယ်
မိမိစိတ်ဒေါသကို မထိန်းနိုင်လျှင် အမှားများစွာကို ကျူးလွန်မိသည့်အပြင် ဒေါသထွက်နေစဉ် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သမျှ၊ ပြုလုပ်သမျှ အရာအားလုံး၏ ရလဒ်သည် ဆိုးကျိုးများသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဘာမှကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး လုပ်မနေနဲ့း) သိနေတယ် မပြောလဲ ဟားဟား ဒေါသမထွက်သင့်ဘူးဆိုပေမယ့်သူနေရာမှာဆိုရင်တော့ ဒေါသထွက်မယ်ဗျ ဒီလိုကစ္စမျိုးဆိုတာက အင်မတန်နေရခက်ပြီး စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ်လေ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ တော့ ခရီးသွားမယ်ဆို ဆေးသောက်ထားတယ်း) လမ်းမှာ အဲ့လိုဖြစ်မှာ စိုးလို့။
ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးပြောလဲ သိနေတယ်...,
It does made me laughs. Great thoughts.
ဒေါသ ဖတ်ပြီး ခင်လေးတောင်
ဒေါသရဲ့ တရားခံက ပဲဟင်း....